Ikhaya elinethezekile endaweni enkulu. - I-Airbnb
Ikhaya elinethezekile endaweni enkulu.
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Alan
Ilungele umndeni noma iqembu. Eduze kwesibhedlela nezikole. Ukuhambahamba imizuzu engu-5 ukuya enkabeni yedolobha. Konke okudingayo kukhona. Inefenisha ephelele, ihlotshiswe kahle futhi ithokomele. Ingase isetshenziswe futhi ifake isidlo sasekuseni ku-B&B eseduzane uma kudingeka. Amakamelo okulala angu-2 we-queen kanye nemibhede emithathu "yenkosi eyodwa" ekamelweni lesithathu. Imibhede esongwayo iyatholakala uma icelwa.
4.64 · 26 okushiwo abanye
I-Katanning iphakathi nayo yonke indawo. Edolobheni i-Premium Mill Hotel kanye ne-dome Café enamathiselwe kumelwe uyibone. Isanda kuthola imiklomelo engu-3 kwezingu-7 WA Heritage futhi isiqokelwe i-UNESCO World Heritage Site. I-Cordial Bar eyehlayo lapho ikhetheke kakhulu. Ubungcweti bokwakheka kwedolobha kubonisa izinsuku zokulima engxenyeni yokuqala yekhulu eledlule.
Uma ufuna ukushayela okumnandi kunezinketho ezimbalwa.
I-Stirling Range isekude ngehora. Ukucaca i-bluff Knoll amahora ambalwa okwenza kodwa kuyafaneleka. Thatha isidlo sasemini sepikiniki ukuze ube naso esicongweni. (Kuwukugibela okulula, ukuhamba ngezinyawo okukhuphukayo ngengxenye enkulu).
I-Kojonup ingamakhilomitha angu-40 entshonalanga futhi ine "Kodja Place" ebonisa i-Noongar Heritage yendawo. Khona-ke kungaba eningizimu-ntshonalanga ukuya e-I Frankland noma eningizimu ye-Mt Barker futhi usezivini ezithile ezinhle kakhulu ezinewayini lendawo elimangalisayo.
Noma ushayela empumalanga. Qala enyakatho ukuya e-Lake Dumbleyung, bese uya echibini i-Grace bese uvakashela i-Mission Hospital lapho bese ubona amachibi abanzi (owomile). Bese uya eningizimu ye-Pingrup futhi ubheke ubuciko be-silo. Ngemva kwalokho, entshonalanga, ngokuya e-Frabing, uyema esikhungweni esisha somphakathi ukuze udle kancane nesiphuzo sokugeza uthuli emthunzini wakho. 60km entshonalanga futhi ubuyele e-Katanning.